तपाई इतिहासप्रेमी हुनुहुन्छ ? राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पाइन्छन् यस्ता दस्तावेजहरु (भिडियाेसहित) « Janata Samachar
तपाई इतिहासप्रेमी हुनुहुन्छ ? राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पाइन्छन् यस्ता दस्तावेजहरु (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा के कस्ता अभिलेख होलान् भनेर जान्ने चाहना इतिहासप्रेमी जनतामा पाइने गर्दछ । वीर पुस्तकालय हुँदै विसंं २०२४ मा संस्थागत स्वरुप पाएको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा उत्तर लिच्छवीकालीन कागजात र मल्लकालीन दस्तावेजहरु छन् ।
लिच्छविकालीन युगमा निमार्ण भएका दस्तावेजहरुको तुलनामा मल्ल कालमा सरकारी दस्तावेजहरु सुरक्षित राख्ने प्रचलन भएकाले तिनै दस्तावेजहरु अभिलेखालयमा प्रयाप्त पाइन्छन् । यद्यपि, लिच्छविकालीन युगभन्दा पहिलेबाट संरक्षित हुँदै आएका दस्तावेज पनि अभिलेखालयमा छन् ।
अभिलेखालयले कुनै मूर्ति वा कसैमा लेखिएको लिपीलाई विशिष्ट प्रकारको कागजमा जस्ताको तस्तै लिपी उतार्ने एवम् फोटो सुरक्षित गर्ने कार्य गर्ने, व्यक्त्तिसँग पुगेको अभिलेखको वास्तविक मूलप्रति प्राप्तिका लागि कार्य गर्ने, यदि सम्भव नभएमा त्यसको प्रतिलिपि राख्ने, पूराना अक्षरमा लेखिएका ग्रन्थ दस्तावेजहरुको मूल प्रतिलाई माइक्रो फिल्ममा फोटो सुरक्षित राख्ने एवम् मूलप्रति नै बिग्रिन लागेको भए अर्को कागजमाथि खुलाएर टास्ने र संरक्षित गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएको छ ।
अभिलेखालयमा कोठाको तापक्रम र आद्रता मिलाएर राखिएको छ । अभिलेखालयमा पाइने सबैभन्दा पूरानो इतिहास भनेको लुम्बिनी तौलिहवाको स्तम्भमा भएको लिपीलाई उतारेर राखेको छ । अभिलेखालयमा भएको सबैभन्दा पूरानो सक्कली मूलप्रति राजा मानदेवको पालाको ताडपत्रमा लिच्छवी लिपिमा लेखिएको दश भूमि शुत्र भनिने दस्तावेज मानिन्छ यद्यपि अभिलेखालयमा मिति नै एकिन गर्न सकिने मूलप्रति भने ताडपत्रमा लेखिएको आठौं शताब्दीको स्कन्दपुराण हो ।
अभिलेखालयमा नवौं शताब्दीको शैव धर्मको निश्वासतत्व संहिताको सक्कली प्रति नै छ । अभिलेखालयमा १२औँ शताब्दीका राजा आनन्द मल्लका पालामा लेखिएको रामायाण, १४औँ शताब्दीको न्यायधिकासीन भनिने नेपालको पहिलो लिखित न्यायशास्त्रको मूल प्रतिसमेत सुरक्षित छ ।
अभिलेखालयमा भएको कागजमा लेखिएको पूरानो दस्तावेज भने कारन्दब्युह भनिने धर्म ग्रन्थ हो जुन १०औं शताब्दी तिरको हुनुपर्ने विश्वास गरिन्छ ।
त्यस्तै, अभिलेखालयमा मल्लकालीन समयमा लेखिएका अजिर्णमञ्जरी र अनुपाममञ्जरी भनिने आयुर्वेदका ग्रन्थ पनि छन्, जसमा पचाउनेदेखि खानेसम्मका कुरा उल्लेख छन् । अभिलेखालयमा राजगुरुबाट बनाइएको पृथ्वीनारायण शाहको जन्मकुण्डली, उनका दिव्योपदेशहरु छन् ।
त्यस्तै, अभिलेखालयमा जंगबहादुर राणाको समयमा निमार्ण भएको मुलुकी ऐन, गिवार्णयुद्धकालीन लालमोहर लगाइएका दस्तबेजहरुसमेत सुरक्षित रूपमा देख्न पाइन्छन् ।